Rallye any Frantsa: handray anjara amin’ny P.208 Rally cup i Hugo | NewsMada
Rallye any Frantsa: handray anjara amin’ny P.208 Rally cup i Hugo
Raha tsy misy ny fiovana, hanomboka ny volana may ho avy izao ny fifaninanana Peugeot 208 Rally cup, izay tafiditra ao anatin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Frantsa, amin’ny hazakazaka fiarakodia. Anisan’ireo handray anjara amin’izany i Hugo Louvel, tompondakan’i Madagasikara, amin’ny karting.
Tsiahivina fa hisy dingana fito ity Peugeot 208 Rally cup ity. Mihevitra ny hifaninana amin’ny hazakazaka miisa roa amin’ny tany sy 6 amin’ny “asphalte”, i Hugo. Hotohanan’ny orinasa Peugeot, izay ho mpandresy amin’ity ka ho afaka hiditra ao anatin’ny tontolo maha matihanina, eo amin’ny rallye.
Tsy vaovao amin’ny fitondrana Peugeot 208 i Louvel satria efa nitondra izany nandritra ny rallye Bagnol –les-Bains andiany faha-19 notanterahina tamin’ny taon-dasa ka nahatafiditra azy tao anatin’ny “Top 10”.
Marihina fa fiara Peugeot 208 ihany ny hany afaka mifaninana. Na izany aza, voafetra ny tanjaky ny fiara, hoentina izay natao ho “2 roues motrices”, ihany sy ny tsy fisian’ny “turbo”, raha tsy hilaza afa-tsy ireo. Karazana “challenge” moa ny Peugeot 208 rally cup.
Boxe : la formation des arbitres et entraîneurs reportée 21/04/2021